मार्सी चामलकाे कोकोहोलो मच्चाउनुकाे पछाडि यस्तो रहेछ कारण! कम्ता रहेनछ व्यापारी र नेताकाे चलखेल – PathivaraOnline
Home > बिजनेस > मार्सी चामलकाे कोकोहोलो मच्चाउनुकाे पछाडि यस्तो रहेछ कारण! कम्ता रहेनछ व्यापारी र नेताकाे चलखेल
काठमाण्डौं, माघ १६ । पछिल्लो समयमा कालीमार्सी चामलसँग जोदिएर नेपाली राजनीति र व्यवसायिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा छ । मार्सीसँग जोडेर नेता र व्यवसायीलाई व्याङ्ग्य प्रहार भइरहेका बेला झापामा कालीमार्सी चामलले राम्रो बजार पाएको छ ।
३ करोड नेपालीलाई खुसीको खबरः अब पाइपबाटै तेल, १ घण्टामै २ लाख लिटर भित्रिने – भिडियो सहित